We.com.mm - သင်မသိသေးတဲ့ ဒူးရင်းသီးမီးဖုတ်ရဲ့ အကျိုးအာနိသင်များ
ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒူးရင်းသီးဆိုရင် လူကြိုက်အရမ်းများသလို မကြိုက်တဲ့သူ၊ အနံမခံနိုင်သူတွေလဲရှိပါတယ်။ တချို့ဆို အနံရတာနဲ့ မူးဝေအော့အန်တာတွေလဲရှိပြီး အနောက်နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ဒူးရင်းသီးကို နံစော်ပုပ်သိုးတဲ့ အသီးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဖြစ်တဲ့ ထိုင်း၊ လာအို၊ ဗီယက်နမ်၊ မလေးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတွေမှာတော့ ဒူးရင်းသီးကို နှစ်ခြိုက်စွာ စားသုံကြပါတယ်။ ဒူးရင်းသီးက ရန်ကုန်မြို့မှာ ဈေးကွက်ဝင် သစ်သီးဖြစ်ပြီး အရွယ်အစားအလိုက် ဈေးနှုန်းတွေရှိတာမို့ သာမာန်လူတွေအတွက် ဈေးလည်းကြီးတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။
ဒူးရင်းသီးဟာ အာဟာရအလွန်ပြည့်ဝပြီး စားသုံးတဲ့သူရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းကျိုးများစွာပေးနိုင်တဲ့ ဗီတာမင် C ၊ ဗီတာမင် B1 ၊ ဗီတာမင် B6 ၊ ဖောလစ်အက်စစ် ၊ သံဓာတ် ၊ ကယ်လစီယမ် ၊ ဆိုဒီယမ် ၊ ဇင့် ၊ ပိုတက်စီယမ်တို့ပါဝင်တဲ့အပြင် Copper ၊ Magnesium ၊ Potassium ၊ Manganese ၊ Thiamin ၊ Riboflavin ဆိုတဲ့ ဓါတ်သတ္တုတွေများစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီအရာတွေက အသက်ကြီးရင့်မှုတာ တားမြစ်ပေးပြီး ကိုယ်ခန္ဓာမှ ဘက်တီးရီးယား၊ ရာသီတုတ်ကွေး၊ ဗိုင်းရပ်ပိုးနဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ မလိုအပ်တဲ့ ဓာတ်တိုးပစ္စည်းနဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေကို တိုက်ထုတ် ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
အပေါ်က ပြောခဲ့တာတွေက ဒူးရင်းသီးရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေပါ။ နောက်ထပ် ဒူးရင်းသီးမီးဖုတ်ရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကို ဆက်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် ............
ဒူးရင်းသီးမီးဖုတ်ကို စားပေးခြင်းဖြင့် ကိုလ်လက်စထရော ကျစေပြီး အာဟာရပြည့်လွယ်တာကြောင့် အဆီချလိုသူတွေ စားသင့်တဲ့ အသီး တစ်မျိုးပါ။ ဒူးရင်းသီးမှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းငယ်တော့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မီးဖုတ်ပြီး စားမယ်ဆိုရင်တော့ မကောင်းတဲ့ အဆီတွေ မပါဝင်တော့ဘဲ စိတ်ချစွာ စားလို့ရပါတယ်။ Antioxidants ပါဝင်မှု မြင့်မားတာကြောင့် ဆဲလ်တွေ ပျက်စီးစေခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် နုပျိုလိုသူများအတွက် အကောင်းဆုံး အရာပါဘဲ။
Potassium ၊ ဆိုဒီယမ်နဲ့ ဗီတာမင် C ၊ B ၊ E တို့လည်း ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်တာမို့ အရိုးကျန်းမာရေးကို အထောက်အပံ့အများကြီးပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်မှုကြောင့်လည်း ဝမ်းပျော့စေပြီး အူမကြီးကင်ဆာ ဖြစ်ပွားခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ နောက်ထပ် ကောင်းမွန်တာတစ်ခုက ကူးစက်ရောဂါတွေကို အလွယ်တကူ တိုက်ထုတ်နိုင်ပြီး သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သွေးလည်ပတ်မှုကို အရင်ထက်ပို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရေး သုခကောင်းမွန်စေအောင် လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းလည်း ရှိပါတယ်။ မဂ္ဂနီစ်ဓာတ် ပါဝင်တာကြောင့် သွေးထဲက သကြားဓာတ်ပမာဏကို ပုံမှန်ဖြစ်အောင် ထိန်းပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ သံဓာတ်ပါဝင်မှုမှာလည်း ငှက်ပျောသီးထက် များပြီး မီးဖွားပြီးစ မိခင်တွေလည်း ဒူးရင်းမီးဖုတ်ကို စားလို့ရပါတယ်။ (တချို့လေ့လာသူတွေကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်နဲ့ မီးဖွားပြီးစ အမေလောင်းတွေ ဒူးရင်းသီးကို လုံးဝမစားသင့်ဘူးလို့လည်း မှတ်ချက်ပြုကြပါတယ်)
ဒူးရင်းသီးမီးဖုတ်မှာ Amino - Acid တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Tryptophan တို့ကြောင့် စိတ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါတွေ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း လျော့ချစေပြီး အိပ်မပျော်ခြင်းကို တားဆီးပေးပါတယ်။ မလိုအပ်တဲ့ Free Radicals တွေကို တိုက်ထုတ်ပေးပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေကို ကျက်လွယ်စေတာကြောင့် အရေပြားကျန်းမာရေးကိုလည်း ထောက်ကူပြုပါသေးတယ်။
အပူစာလို့ခေါ်တဲ့ ဒူးရင်းသီးကို လိုအပ်တာထပ် ပိုပြီးများများစားရင် တန်ဆေး လွန်ဘေးဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း အပူကန်ခြင်း၊ ဖျားနာခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ သွေးတိုးခြင်း၊ ဆီးချိုတက်ခြင်း၊ လေထိုးလေအောင့်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒူးရင်းသီးစားရင်း ဘီယာသောက်တဲ့အခါ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာ အပြင်းအထန်ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ခံစားရမှာပါ။ ဘီယာ၊ အရက်၊ ဝိုင် စတဲ့ Alcohol ပါဝင်တဲ့ သောက်သုံးစရာဟူသမျှကို ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ ဒူးရင်းသီးက တခြားသစ်သီးတွေထက် အဆီဓာတ် (၃)ဆပိုများပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်များသူ၊ အဝလွန်နေသူ၊ ဝိတ်ချသူတွေအနေနဲ့ ရှောင်သင့်ပါတယ်။ (အရက်နဲ့ လုံးဝ မတည့်ပါ သေဆုံးစေတဲ့အထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်)
Lip injection နှုတ်ခမ်းဆေးထိုးတော့မယ်ဆို ဒါလေးတွေတော့သိဖို့လိုမယ်နော်
Email လား? Gmail လား?
ဟင်းချက်တဲ့အခါ လက်မှာစွဲနေတတ်တဲ့ ကြက်သွန်ဖြူအနံ့ကို ဘယ်လိုဖျောက်မလဲ?
အသားပတ်တဲ့ ပျိုမေတို့ အတွက် ဆောင်းတွင်းမှာ လိမ်းသင့်တဲ့အဆီ (၅) မျိုး